Madaxweyne Xasan “Sanadka soo socda waxaa xooga saareynaa dib u eegista dastuurka iyo …” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan “Sanadka soo socda waxaa xooga saareynaa dib u eegista dastuurka iyo …”
Waa inaan dib u jaleecnaa shirkii labada maalmood oo si cad loogu qeexay horumarka ballaaran ee aan ka sameynay howlihii New Deal iyo Somali Compact, waana inaan ogaanaa caqabadaha jira oo aan si wadajir ah uga hadalnaa sidii aan aan u dhameystiri laheyn inta harsan annagoo kaashaneyna beesha caalamka.
Madaxweynaha ayaa yiri “Waxaan u mahadcelinayaa Dowladda Denmark oo shirka martigelisay iyo Qaramada Midoobay oo aan shirka wada shir-guddoomineynay. Doodihii shirka aad bey ii dhiirigeliyeen.
Waxaana u mahadcelinayaa wafuudii 59ka dal ka kala timid oo Copenhagen nagala soo qeybgashay shirka oo na tusay sida ay uga go’antahay taageerada Somali Compact.
Sanadka soo socda, Dowladda Federaalka waxey ahmiyad iyo mudnaan gaar ah siineysaa howlaha muhiimka ah ee noo sahlaaya inaan ahmiyadaha siyaasadeed ee ku qeexan Hiigsiga 2016ka, sida Dib u eegista dastuurka iyo ansixintiisa, nidaamka Federaalka iyo doorashooyinka sida dimoqraadiyada ah u dhici doona.
Xukuumadda iyo Baarlamaanka waxey diirada saari doonaan bilaha soo socda sidii loo xaqiijin lahaa inaysan dhicin daahis, oo ay hubinayaan dhismaha hay’adaha muhiimka ah iyo nidaamyada lagu xaqiijinayo in laga gun gaaro dhaqangelinta hiigsiga 2016 taasoo wadada u sii xaareysa sidii loo heli lahaa nabad waarta, xasilinooni iyo dib u heshiisiin.
Muungaab: Qofkii hanti looga heysto Muqdishi halasoo xiriirto maamulka gobolka Banaadir